၁၅၀၀ တန် CDMA ဖုန်း ( Android handset အမျိုးအစား) များအတွက် အင်တာနက် Setting ထည့်နည်း ။ | အ မှတ် တ ရ ။
၁၅၀၀ တန် CDMA ဖုန်း ( Android handset အမျိုးအစား) များအတွက် အင်တာနက် Setting ထည့်နည်း ။
Internet Setting ထည့်နည်း၁ – ဖုန်းရဲ့ Setting ထဲကိုဝင်ပါ ၂ – Wireless & networks ထဲဝင်ပါ (သို့မဟုတ်) Android version 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများဖြစ်ပါက Wireless & Network ကဏ္ဍအောက်က More… ထဲသို့ဝင်ပါ။
၃ – Mobile networks ထဲကိုဝင်ပါ ၄ – Access Point Names ကိုဝင်ပါ ၅ – Menu Key ( မျဉ်းကြောင်းသုံးကြောင်းထပ်) ကိုနှိပ်ပြီး New APN ကိုနှိ်ပ်ပါ ၆ – အောက်ပါအတိုင်းလိုက်ဖြည့်ပါ Name – မိမိနှစ်သက်ရာ ( ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါ။ ဥပမာ – mectel ) APN – #777 Proxy – ဘာမှမထည့်ပါ Port – ဘာမှမထည့်ပါ username – mectel@c800.mm Password – 0000 Server – ဘာမှမထည့်ပါ MMSC – ဘာမှမထည့်ပါ MMS Proxy – ဘာမှမထည့်ပါ MMS Port -ဘာမှမထည့်ပါ MMC – 414 လို့ပေါ်နေရပါမယ် MNC – 01 လို့ပေါ်နေရပါမယ် Authentication Type – PAP or CHAP APN type – * ( * ဒါလေးပဲရေးလိုက်ပါ ) APN Protocol = IPv4 ကိုရွေးပါဒါတွေအားလုံးပြီးသွားရင် menu key ကိုနှိပ်ပြီး Save (or) Done ကိုနှိပ်ပါ ဒါဆိုရင် အင်တာနက် setting ထည့်ခြင်းအဆင့်ပြီးပါပြီ။ ဖုန်းအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုဖွင့်နည်း ဖုန်းကနေ အင်တာနက်စတင်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ရုံပါပဲ။ ၁ – setting ကိုဝင် ၂ – Wireless & Networks ထဲကိုဝင် ၃ – Mobile Network ထဲကိုဝင် ၄ – Data Enable ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် သင့်ဖုန်းရဲ့ Notification Bar ( အပေါ်ဘက် လိုင်းအားပြသောနေရာ နံဘေး) တွင် အပေါ်တက်အောက်ဆင်း မြှားလေးတစ်ခုပေါ်လာပါ့မယ် အင်တာနက်စသုံးလို့ရပါပြီ။ Credit to : http://www.myanmarmobileapp.com Like this:Like Loading...
« ၁၅၀၀ တန် CDMA 800MHz Sim Card စတင်အသုံးပြုနည်း ။
Candy Crush Saga ကို iDevice မှ Hack မယ် ။ »
Categories : ဝေမျှခြင်း။, How to
Anonymous (08:19:04) : Aw, this was an incredibly nice post. Takingafew minutes and actual effort to produceasuperb article… but what can I say… I hesitatealot and don't seem to get nearly anything done.Here is my blog … Pure Garcinia Cambogia
Anonymous (02:26:54) : Yes! Finally someone writes about male enhancement.My web blog: ezraeuban
Anonymous (16:05:55) : I'm impressed, I have to admit. Seldom do I come acrossablog that's equally educative and interesting,and withoutadoubt, you've hit the nail on the head. The problem is something which too few people are speaking intelligently about. I'm very happy that I stumbled across this during my hunt for something concerning this.my weblog … Vydox Review